Ciidammada Kenya ayaa sheegaya in ay dileen tiro ka badan 10 dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsan. – Madal Furan
Hoy > Warka > Ciidammada Kenya ayaa sheegaya in ay dileen tiro ka badan 10 dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsan.
Ciidammada Kenya ayaa sheegaya in ay dileen tiro ka badan 10 dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsan.
Nayroobi (Madal Furan) – Afhayeenka ciidammada Kenya Mr..Paul Njuguna ayaa tilmaamay in ay dagaalyahanada Ururka Al-Shabaab ay ka dileen ku dhowaad 10 dagaalyahan, kadib markii maanta ciidammadu si kedis ah ugu daateen aag lagu magacaabo Taksiile oo ku yaal degmada Pandanguo ee Galbeedka Lamu saacadu markii ay aheyd 6.45am.
Wargeysyada qaar waxa ay dhigayaan in maleeshiyaadka laga dilay Al-Shabaab ay tiradoodu tahay 18 halka qaarna ay leeyihiin waa 10 keliya.
Pandanguo ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha laga soo qaado weerarada Al-Shabaab ka geystaan degaannadaasi xuduudka la leh Soomaaliya.
Sida ay sheegtay majaladda Daily Nation ee ka soo baxda Nairobi ayaa waxaa lagu sheegay in sanadkii hore ay ururka Al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaal degaankaas.
Sidoo kale waxa ay cagta sii marsiiyeen maleeshiyaadkani goob daawo oo degmada ku tiiley, Maalinta oo Isniin ah ayaa afhayeenka ciidammada Kenya Paul Njuguna waxa uu sheegay in ay 7 qoryaha AK47 iyo rasaastooda ku qabsadeen kadib dagaalkii maanta.
Ma jiro weli wax war ah oo laga heli karo weli dhanka warfaafinta kooxda Shabaab oo ku saabsan dagaalkani.
“3 ka mid ah askarteenna ayaa dhaawacyo fududi ka soo gaareen dagaalka waxaana lagu daweynayaa isbitaallada . Ciidankeenu weli waxa ay ku daba jiraan maleeshiyaadka kale ee mintidiinta ah ee la cararay dhaawacyo soo gaaray.” ayaa uu hadalkiisa ku daray Mr Njuguna.
Waxa uu ka codsaday dadweynaha degaanka Pandanguo in ay wixii macluumaad ah ee ay helaan ay la soo wadaagaan booliska iyo haddii ay arkaan Al-Shabaab dhaawac ah oo degaanka daawo ka soo raadsaday.
Kenya oo wada qorshe ay ku xireyso xerada qaxootiga Dhadhaab